GlobalNet | Dedicated Internet Services Move from Urban Office-Complex to Residential Area
Dedicated Internet Services Move from Urban Office-Complex to Residential Area
GlobalNet is the leading ultra-fast connectivity provider and now leading and fulfilling the needs of SME and enterprise requirement. Remote working connectivity, video conferencing collaboration services, cloud computing and storage service are most popular applications throughout the pandemic.
GlobalNet’s experts are also designing the Hybrid Office for its client needs.
By doing Hybrid Office with GlobaNet DIA remote employees are gathered together in the meeting to beamore productive and successful working environment. We are hereby proud to say that we are pioneers in virtual management.
TO GET YOUR BUSINESS GOALS REACH OUT TO US TODAY!
Please Contact your trusted partner GlobalNet
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် Covid-19ကပ်ရောဂါများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကမြို့ကြီးများရှိ ဝေးလံသော ရုံးများနှင့် အိမ်များတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အင်တာနက်ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှုများသည်ပိုမိုအရေးပါလာသည်။
GlobalNet သည် အလွန်လျင်မြန်သော အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများတွင် Market Leader လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ယခုအခါတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများရဲ့ လိုအပ်ချက်များကိုဦးဆောင် ဖြည့်ဆည်းပေး လျှက်ရှိပါ သည်။
Remote working connectivity၊ Video Conferencing၊ cloud computing နှင့် storage ဝန်ဆောင်မှုများ သည် Pandemic ကာလ တစ်လျှောက်လူကြိုက်အများဆုံး application များဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်လူကြိုက်များရသလဲဆိုတော့ GlobaNet ၏ Dedicated Internet Service (DIA) နှင့် လုပ်ငန်းများကို Hybrid office အဖြစ် ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်းတို့က ၀န်ထမ်းများအတွက် အလုပ်များပိုမိုတွင်ကျယ်စေပြီး လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးအတွက် ကောင်းစွာ အထောက်အပံ့ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
GlobalNet ၏ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှလည်း Users/Clients တို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး Hybrid Office များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
Virtual Management များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းများအားလုံးအနက်မှ ရှေ့ဆုံးမှရပ်တည် နေသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် GlobalNet မှ များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများအတွက် Virtual Management အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် GlobalNet ရဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နဲ့ အခုပဲ ဆက်သွယ်တိုင်ပင်လိုက်ပါ။
? Learn more: www.globalnet.com.mm/domestic-connectivity/dia/
#GlobalNet #RemoteWorking #HybridOffice #EnterpriseDIA
“AMCHAM CSR Excellence Award...
The American Chamber of ...
Zoom သည် ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ...